राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा ओमको आइसियुमा भर्ना
कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा स्वास्थ्यमा थप समस्या भएसँगै ओम अस्पतालको आइसियुमा भर्ना भएका छन्।
टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने र श्वासप्रश्वासमासमेत समस्या देखिएपछि उनी आइसियु भर्ना भएका हुन्। ओम अस्पतालले विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गरि पूर्वउपप्रधानमन्त्री थापालाई आइसियु कक्षमा भर्ना गरिएको जनाएको छ।
उनको उपचारमा अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टरसमेत रहेका सिनियर कन्सल्टट्यान्ट फिजिसियन डा. विश्वनाथ कोइराला, सिनियर कन्सल्ट्यान्ट पल्मोनोजोलिस्ट डा. सुबोध सागर ढकाल, कन्सल्ट्यान्ट इन्टेन्सिभिस्ट डा. प्रमेश सुन्दर श्रेष्ठलगायत रहेको चिकित्सक टोली संलग्न रहेको अस्पतालले जनाएको छ।